Ukubuyekezwa Kokuzala Kokuzingela Kwe-Afghan Hound - Izinhlobo
Yini i-Hound Afghan?
Abantu base-Afghani bavela eqenjini le-hound, noma ukunemba okuthe xaxa kuvela emndenini we-sinthound, lapho zonke izinja ezisheshayo ngokweqile, ezinjenge-greyhound-ziyingxenye.
Inja yase-Afghanistan ime kusuka kuma-intshi angama-26 kuye kwangama-28 lapho ibuna, kuyilapho inja imile ngamasentimitha angama-24 kuye kwangama-26 ubude. Abesilisa banesisindo cishe samakhilogremu angama-60 kuthi abesifazane babe nesisindo esingamakhilogremu angama-50.
Isici esibopha kakhulu se-Afghan enhle ingubo yakhe, ende futhi enosilika kuyo yonke indawo enja, ngaphandle kobuso nangemuva, lapho imfushane futhi icwebezela.
Uneminyaka emingaki lo mhlobo?
Yini i-Afghan eyazalelwa ukuyenza?
Isetshenziselwani i-Afghan namuhla?
Ingabe kulula ukuziqeqesha?
Angena miphi imibala?
Ingabe badinga ukuzivocavoca umzimba?
Ingabe imidlwane yase-Afghan kulula ukuyifaka ezindlini?
Ngazo zonke lezo zinwele, akunzima yini ukuzilungisa?
Ngabe abantu base-Afghanistan banakho ukukhubazeka kofuzo?
Ngabe isimo sabo sinjani?
Ngabe abantu base-Afghani banayo i-quirks?
Baphila isikhathi eside kangakanani?
Ingabe zilungile ngezingane?
Ingabe badla kakhulu?
Uhlakaniphe kangakanani umuntu wase-Afghan?
Ngabe ama-Afghani awuhlobo oluthandwa kakhulu?
Ngingafunda kuphi kabanzi ngama-Afghans?
I-Afghan ihamba phambili njengomgijimi wenkundla ophukile, futhi ubuhlakani bohlobo, ukukhuthazela, ukuqina, nobuqili kuyinganekwane. Abantu base-Afghanistan bangaphinde bamiswe kabili ngesivinini okungenani esingu-35 kuye ku-40 mph bese bevula i-dime, bangathatha ukweqa okubanzi kwamamitha angama-20 futhi bangakwazi ukweqa izinyawo eziyi-7 ziqonde phezulu zisuka lapho zimile khona.
Ngenkathi i-greyhound ingathatha isikweletu ngokuba wuhlobo oludala kunawo wonke lwe-sinthound, i-Afghan neSaluki abekho emuva kakhulu. Eqinisweni, kungumbuzo wenkukhu neqanda wokuthi yiziphi izinhlobo ezimbili zakamuva eza kuqala.
Ngeshwa, noma yiluphi ulwazi oluphathelene nesikhathi esidala sase-Afghanistan lulahlekile ebunzimeni besikhathi.
Ngaphandle kokungabaza, zombili izinhlobo zineminyaka eyizinkulungwane ubudala futhi ekuqaleni, zahlanganiswa ukukhiqiza isilwane esingcono kakhulu sesimo sezulu nendawo ezokuzingelwa. Izwe lasentshonalanga lathola i-Afghan phakathi nekhulu le-19 lapho amasosha aseBrithani ebuyisa izinhlobo zokuqala e-England.
Ekuqaleni bekunezinhlobo ezimbili ze-Afghan: I-hound yentaba eboshwe kakhulu, ehlanganiswe eduze nohlobo olugwadule futhi oluhle lwasogwadule, oluphethe ijazi elincane. Izinhlobo zasogwadule nezintaba zahlanganiswa, kwaveza i-Afghan esiyaziyo namuhla.
Ama-Afghani akhuliswa ngabantu base-Afghanistan, Pakistan kanye nasenyakatho ne-India ukuyodlala indawo enezintaba. Le hound yasebukhosini ingumzingeli wokuqala wezingwe; inyamazane yakhe yomlando, kepha bazokwehlisa noma babambe cishe noma yini ezobaleka kubo.
Kwakungezasebukhosini nezizwe ngokufanayo futhi umsebenzi wabo omkhulu kwakuwukuvikela amadolobhana, ukufaka ukudla ebhodweni lesidlo sakusihlwa, noma ukumane nje banikeze ukuzijabulisa kwangaphandle kwezikhulu.
Njengabazingeli, ama-Afghan Hound abanjwa kakhulu. Ngenkathi ama-hounds asebukhosini agcinwa efuyiwe, izinja zasemaphandleni zazingamahlathi futhi zazazi kahle ngokuzihambela.
Okhovane babevame ukundiziswa nezinja lapho behamba ngezinyamazane. Izinja zazigijinywa ngezinsimbi noma ngedwa kuzo zonke izilwane, ngokuya ngamandla wenja ngayinye.
Kunokunye ukulandisa kofakazi bokuzibonela kwabantu base-Afghani behlela phansi izingwe zodwa, bebamba ikati entanyeni ngaphezu kwamahlombe futhi beluma ngomgogodla ukubulala.
I-Afghan yanamuhla ivame ukugcinwa njengesilwane sasekhaya, ngoba umdlalo wokudlala obukhoma nezinja awusasebenzi. Kwamanye amazwe kuvinjelwe ngokuphelele. Abantu base-Afghani bangabathandekayo bezwe lombukiso wezinja futhi ngamalokhi abo agelezayo nesimo sabo sokuzihlukanisa, kunzima ukubashaya njengabakhombisi.
Abanye abantu base-Afghanistan abanenhlanhla banabanikazi ababathathela ukuheha, umdlalo ofanisa ukuzingelwa kwe-sightsounds. Lapho i-Afghan empeleni ithatha isinqumo sokuthi ithanda ukulalela, ingakwazi ukusebenza ngokusemandleni.
Cha abaka. I-Afghan ingumcabango okhululekile. Lokhu bekudingeka enja ekhuliselwe inkambo yamakati amakhulu. Abantu base-Afghanistan bangabaleka cishe noma yini emhlabathini onamadwala futhi ongalingani, futhi babevame ukushiywa bodwa 'ekubambeni'. Ngenkathi umuntu wase-Afghan ehlakaniphile futhi enobuqili, uzokusebenzisa lokhu ukuzizuzisa yena.
Icebo lokwenza i-Afghan yakho icabange ukuthi noma yini ofisa ayenze empeleni kungumbono wayo, bese uyamncoma ngokukhalipha kwakhe. Abantu base-Afghanistan abathathi izindlela ezinqala zokuqeqesha futhi uma belashwa kanzima, bavame ukwenqaba UKWENZA lokho kuvivinya umzimba futhi.
I-Afghan ingaba yisithulu ngokukhetha lapho icelwa ukuba yenze okuthile ebona ukuthi ingaphansi kwakhe. Bangaba nobuciko obumangalisayo lapho benza ukulalela, okucasula abanikazi bezokuncintisana.
Ama-Afghani eza ngayo yonke imibala kepha amabala, kepha ukumakwa okumhlophe noma okumhlophe, ikakhulukazi ebusweni, kubukelwe phansi. Imibala ejwayelekile kakhulu emnyama, emnyama nomnyama futhi efihliwe okumnyama. Elinye lamaphuzu abamba iqhaza kakhulu e-Afghan wuthingo lwenkosazana angafika ehlotshiswe ngalo!
Ngaphandle kwemibala ejwayelekile, kunama-grays ansomi aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-brindle anemigqa yawo wonke ama-hues, ama-navy blues, okhilimu besiliva, kanye nezinhlanganisela zawo ezahlukahlukene, konke okune-masking noma ngaphandle kwayo.
Omunye wemibala engajwayelekile kakhulu yi- 'domino,' lapho umbala wobuso wenja ulula kunengubo yomzimba enesifihla-buso esimnyama esiqala ngaphezulu kwamehlo, njengomphumela wekepisi leMickey Mouse.
Kuyo yonke imibala, amarimu wamehlo, izindebe, nezikhumba zamakhaleni kufanele zibe mnyama ngombala. Amagama amancane aphaphathekile eceleni kwe-kaleidoscope yemibala abantu base-Afghan abangayigqoka.
Ngenkathi umuntu wase-Afghan ehlala ekhaya kusofa ebuka i-TV, udinga ukuzivocavoca umzimba kakhulu noma uzobhoreka. I-Afghan enesithukuthezi ingenza inani elingacabangeki lomonakalo ongavamile kakhulu wendlu nokuqukethwe kwayo.
Le hound efana nekati izovula amadilowa futhi isuse zonke izingubo zakho zangaphansi ukuze ihlafune kahle, ikhuphuke etafuleni legumbi lokudlela ukuze ilandele ingwejeje ngaphandle kwewindi noma yebe isidlo sakusihlwa kusihlwa ngaphezulu kwesiqandisi.
Ngemihlathi yabo enamandla, bangadla ingalo yesitulo ngesikhathi esincane kakhulu. Igceke elibiyelwe ngosayizi omuhle liyisidingo, njengoba i-Afghan ingahamba ngesivinini esifinyelela ku-12 mph amahora amaningi futhi ingaphefumuli kanzima.
Cha abaka. Yize kuncike kakhulu kumdlwane ngamunye, njengomthetho i-Afghan yenkosi ayithandi ukutshelwa ukuthi yenzeni. Kuze kube yizinyanga eziyisithupha ubudala abantu base-Afghan kungalindelwa ukuthi bahlanzeke ngokuphelele, njengoba bengakakhuli ngokwanele ukubamba isikhathi eside.
Lapho uqeqesha noma iyiphi i-Afghan, ukubekezela nobumnene kuyadingeka. Ukuhlekisa nakho kuyasiza.
Yebo, ukuzilungisa kungumsebenzi okufanele ubhekelwe masonto onke ngaphandle kokuhluleka. Abantu base-Afghani badinga ukugezwa masonto onke kanye nemigwaqo yokuvikela amabhantshi ukuvimbela leyo ngubo ebabazekayo ukuthi ingabi yinhlekelele edabukisayo.
Iphethini yejazi ikhula ngokwemvelo. Imidlwane ivame ukuba kude nalokho okulindelwe ngumnikazi omusha, ngoba ayifani nabantu abadala abafake amadevu. Izidlwane zase-Afghan zizalwa ziboshwe ngokushelela. Ijazi le-puppy elijiyile, elithambile likhula kancane.
Cishe unyaka owodwa ubudala, ijazi elidala elikhulayo liqala ukuzibonakalisa futhi ijazi le-puppy liqala ukuwa, kwesinye isikhathi lithatha kuze kube yilapho inja ineminyaka emithathu ngaphambi kokuba ihambe ngokuphelele.
Lesi yisikhathi lapho ukunakekelwa kwejazi kuba yiphupho elibi, njengoba ijazi lomdlwane lithungatha namata embhedeni wabantu abadala oshisayo. Ezinye izilwane ezifuywayo zase-Afghani zizithola zisikiwe ngalesi sikhathi, njengoba umnikazi evele anikele.
Abantu abadala base-Afghanistan bathinteka kalula ekuchithekeni entwasahlobo futhi bawe ngemuva kokugula futhi ama-bitches angakhokhiwe azolahlekelwa ijazi njalo emva kwesizini. Abafuyi abanonembeza bazohlala bachaza ubunzima bokunakekelwa kahle kwengubo futhi bonke banikeze abanikazi abasha izifundo zokuzilungisa.
Abantu base-Afghans abagula kakhulu bathambekele kuma-parasites, amathumba nezifo zesikhumba, ngakho-ke ukunakekelwa kwengubo ngokucophelela kubaluleke kakhulu.
Ngeshwa, ziyakwenza kepha azithambekele kulokhu kunezinye izinhlobo. I-Hip dysplasia, i-cataract yentsha, i-hypothyroidism kanye nokushoda kwe-enzyme kungatholakala kulolu hlobo. Ngokuvamile, lo mhlobo ungumqemane.
Abantu base-Afghans bangakwazi ukusebenzisa i-gamut kusuka kwesibindi ngokweqile kuya kumahloni, futhi lokhu kungenzeka ngisho naphakathi kwabantu abazalelwe kudoti ofanayo. Ukuzibandakanya komphakathi kubaluleke kakhulu kulolu hlobo, ngoba bangaba yindlala uma beshiywa bodwa.
Ngokuvamile, abantu base-Afghani bangama-off-off futhi kwesinye isikhathi baxwaye abantu abangabazi. Isimo sabo sengqondo esiphakeme nesobukhosi sibenza babe yizinja ezinhle zokuvimbela. Bazokhetha abangani babo, kakhulu njengoba kuzokwenza amakati.
Eduze kwabangane bakhe abakhulu, i-Afghan ikhombisa uhlangothi lwayo oluhlekisayo, olunenkani nolucishe lusabise.
Ngokuhamba kwabo ngamandla, ama-Afghans azophishekela futhi athumele noma yini ebalekayo kubo futhi okungafanele avunyelwe ukugijima ngokuphelele. Uma ukhuliswa ngumngani we-feline, i-Afghan ingathembeka impela ngekati lasekhaya, kepha isazojaha omunye umuntu.
Ngokuvamile, abantu base-Afghani bangohlobo olungajwayelekile nolungajwayelekile, kodwa kunengxenye eyodwa yemvelo yase-Afghan evame ukunganakwa. Ama-Afghan Hounds angamasela enhliziyweni futhi azofaka noma yini ethatha ukuthanda kwawo.
Bangakwazi ukwenza izinto ezintsha lapho bengena ezindaweni abanikazi babo abafuna ukuzigcina bengekho kuzo, futhi amandla abo okuphephetha ukudla noma ama-athikili kude nangaphansi kwekhala lomnikazi acishe abe ngumlingo. Umnikazi okhaliphile kumele afakazele ingane yakhe kahle futhi agcine isinyathelo esisodwa kule Houdini enoboya.
Lapho umuntu wase-Afghan ezithola esesimweni esicindezelayo, imvamisa uzovele alale kuze kuphele ibhizinisi lonke. Esinye isibonakaliso esiqinisekile senja ejabule noma ekhathazekile ikhala eliconsayo.
Cishe akunakwenzeka ukugcina i-Afghan ishiye ifenisha ephakanyisiwe. Kubonakala sengathi bacabanga ukuthi lena indawo yabo efanele.
Baziwa ngokududula abanikazi babo embhedeni. Kumlandeli weqiniso wase-Afghan, akukho okungathatha indawo yalesi simnene, ukujabulisa, ukukhungatheka futhi esinenkosi enkulu yezinja.
Ukuze uthole uhlobo olukhulu, i-Afghan ihlala isikhathi eside. Iminyaka eyi-12 kuya kwengu-14 akuyona into engavamile, futhi izilwane ezinempilo ezineminyaka engu-18 ubudala zaziwa. Abantu base-Afghanistan bahlushwa yizikhalazo eziningi ezifanayo ezitholwa ezinye izinhlobo, njengokufiphala kwamehlo nokuzwa, nesifo samathambo. Umdlavuza nesifo senhliziyo nakho kuyazilimaza zohlobo.
Lapho izingane ziyingxenye yesithombe, kuwukuhlakanipha ukufundisa bobabili ukuhloniphana kwe-Afghan nengane nokuthi kufanele baziphathe kanjani. Ama-Afghani ayinzalo ethintekayo futhi anombani ongokwemvelo osheshayo.
Banokuthula futhi banesineke, futhi banokuqonda okuningi. Lapho umuntu wase-Afghan ekhathele ukunakwa, uzovele azenze aswele, abuyele endaweni ekude nesixuku ayolala kancane.
Njengoba abantu base-Afghani bengaphezulu kohlobo olude, oluhlelekile lwenja, badla okuncane kakhulu kunalokho obekungashiwo ngosayizi wabo. Ama-Afghani adinga ukudla kwezinja okuseqophelweni eliphezulu, namafutha emifino amaningi ukuze aqhubeke nokubukeka futhi azizwe engcono kakhulu.
Kuyadingeka futhi ukuvikela leyo miphetho yendlebe ende ngama-snoods. Lezi zigqoko zohlobo lwe-stocking-tube zibamba izindlebe emuva esitsheni futhi i-Afghan esheshayo ayizihluphi izinwele zakhe.
Incwadi yamanje neyathandwayo yabangela ukushaqeka okukhulu kubanikazi base-Afghanistan emhlabeni wonke ngenkathi ibala ukuthi abafile base-Afghanistan bagcina ohlwini lwazo 'lwezobunhloli obusebenzayo'.
Ukusebenza kobuhlakani akuhlangene ngalutho 'nokuhlakanipha' kwangempela kwanoma yiluphi uhlobo. Lezo zinhlobo ezithuthukiselwe ukusebenza eduze nomuntu, empeleni, zizoba lula ekuqeqeshweni kune-Afghan ehlakaniphile, umsebenzi wayo kwakuwukubamba inyamazane eyingozi yodwa, incike ebunzimeni bayo ukuze ibone ukuthi izophila futhi izingele ngolunye usuku.
I-Afghan ithole usuku oluhle emuva kweminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha kanye nasekuqaleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje, lolu hlobo lwezinhlanhla luye lwehla kwinhlolovo yokuthandwa kwabantu futhi manje seluhlala eduze nendawo engamashumi ayisithupha, eCanada nase-United States. Ngohlobo olunesidingo sohlobo olukhetheke kakhulu lomnikazi, akukubi lokho.
Kunezincwadi eziningi ezinhle kakhulu ezitholakalayo ngohlobo. Imitapo yolwazi eminingi inesihloko esisodwa noma esinye kodwa seqiniso leqiniso, ulwazi olwenziwe ngezandla, kuphakanyiswa ukuthi abanikazi abangaba khona bahambele imibukiso yezinja yasendaweni futhi bakhulume nabathandi bezinto.
I-Afghan Hound Club yaseCanada, iklabhu likazwelonke onobhala walo, uDebbie Hodgins, angaxhumana naye e-PO Box 60, Hanley, Sask., S0G 2E0, eCanada ayikho nje kuphela ukusebenzela abathandi besikhathi esidala kepha ukusiza labo abasha kulolu hlobo.
Uzakwethu waseMelika, iAfghan Hound Club of America ingafinyelelwa ngoNks uNorma Cozzoni ku-43W612 Tall Oaks Trail, e-Elburn, IL 60119, e-USA.
23 Ukuxuba kwe-Malamute: Yikuphi okuyi-crossbreed okuhle kakhulu kuwe?
usayizi we-lab blue heeler mix
iqhubeka kanjani inja yokubopha inja
abiza malabhu esiliva malini
imidlwane yokuxuba i-rottweiler ne-german
Ukulala kwe-puppy yeviki eli-14
ungenza kanjani ilebhu yesiliva